Wasaaradda Maalyadda Soomaaliya oo lagu heley musuamaasuqii ugu waynaa abid – XAMAR POST
Wasaaradda Maalyadda Soomaaliya oo lagu heley musuamaasuqii ugu waynaa abid
By Mohamed Ahmed On Jul 6, 2017
Ilo lagu kalsoon yahey ayaa sheegey in wasaaradda Maalyadda Soomaaliya ay ka dhacdey wax is dabarin tii ugu weyneyd abid kadib markii daqligii lagu shubey qasnadda dowladda kala bar laga waayey.
Arintaan ayaa soo shaac baxdey kadib markii kulan golaha wasiiradda ay yeesheen dhamaadkii bishii hore wasaaraddu soo bandhigtey warbixin ku saabsan daqliga ay soo xareeyeen hay’adaha dowladda, waxaana qasnadda dowladda laga waayey lacag gaareysa toban malyan oo doolar (10,000$), taas bilihii ugu danbeeyey lagu wareegsadey xisaabaad gaar loo leeyahey.
Warbixinta ayaa sheegeysa in qorshahaan dhaca lacagta uu danbeeyey agaasimaha daqliyada u qaabil wasaaradda maalyada oo lagu magacaabo Jacfar oo qaraabo ay yihiin Riisalwasaaraha dowladda, isaga oo ka dhaadhiciyey wasiirka maalyadda una sheegey iney tahey fursadda kali ah ee ay heystaan isla markaana dhaqaale badan ku heli karaan iyada oo aan la fahmin.
Warbixinta ka dib ayaa kulanka golaha wasiirada waxaa ka dhex bilaabatey dood iyo buuq ka dhashey warbixinta iyadoo wasaarado badana ay ku doodeen in laga been sheegayo daqliga dowladda isla markaana wasaaraduhu ay bilaabeen in soo bandhigaan daqliga runta ah ee la soo xareeyey. Shirka ayaa intaas ka dib lagu kala dareerey iyada oo eedeyn dusha looga tuurey wasaaradda isla markaana wasiirku ku inkirey agaasimaha inuu wax la ogaa.
Agaasimaha daqliyada Jacfar oo lagu yaqaano wax is dabaris iyo leexsashada daqliga, iyo weliba in la tirtiro xisaabaadka dowladda ayaa waxaa hadda ku socda baaris iyada oo wasiirka maalyaddana lagu tuhmayo inuu doonayey in la qariyo lacagtaas aadka u badan. Xisaabiyaha dowladda oo wax laga weydiiyey ayaa ka gaabsadey dhacdadaan lagu leexsadey lacagaha aadka u badan. Xogtu waxay intaas ku dareysaa in hadda lacagihii qaar laga soo celiyey xisaabaad gaar loo leeyahey isla markaana uu ku qoran yahey agaasimaha daqliyada mudane Jacfar.
Lama oga tilaabada laga qaadi doono wasiirka iyo agaasimaha daqliyada oo ay ku caddahey iney leexsadeen daqligii dowladda.
Riisalwasaaraha dowladda ayaa aad uga niyad jabsan musuqqa ka dhex jira wasaaradda maalyadda iyada oo wasiirka maalyaddu uu maalin kasta ka been sheego daqliyada. Arintaan ayaa kala shaki ka dhex abuurtey hay’adaha dowladda waxaana xayiran daqliyadii lagu shubi lahaa qasnadda dowladda oo noqotey gacan aan wax lagu aamini karin. Hay’adaha dowladda ayaa bilaabey iney lacagaha ay soo xareeyaan ku wareejiyaan Riisalwasaaraha xukuumadda maadaama la aamini waayey qasnadda dowladda.
Dowlada Soomaaliya Oo la Soo wareegtay Maamulka Hawad Sare Oo Ay ku jirto hawad Somaliland
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa Sheegay in Maslaxada Soomaliya ay ku jirto in lala Safto dalalka uu sucuudigu hogaaminayo